China igqunyiwe kupholile Bag 32-Ngaba Yenza kunye Factory | UKumkani
Isampula kunye nexabiso
Xa igqunyiwe kuyabanda Ingxowa 32-Can
Black Unisex Iindawo ezinika umdla Laptop manzi School Ba ...
Umthamo omkhulu weHockey yezixhobo zeHockey
Ihowuliseyili Ihowuliseyili Fashion Women neebhegi 500D CORDURA® To ...
Ibhegi ebhegi yebhegi yomyalezo
Kupholile ubhaka okungangeni manzi igqunyiwe ukuvuza-ubungqina
Ubhaka wokuhamba ngePort yokutshaja i-USB
I-Cooler Bag e-proof-proof insulated 30 iinkonkxa
Umkhosi weTactical Backpack 40L yoMkhosi wePakethe
Cacisa iPackpack Backpack Stadium evunyiweyo
Ukuphefumla iBhegi yokuPhatha
Ubhaka weLaptop kuhambo lweShishini
Uyilo lokuvula olubanzi lwenza ukuba kuthathwe izinto, nokuba ubeka izinto ezininzi ungabona into oyifunayo xa uthi krwaqu. Unokuqhutywa ngamagxa ukukhulula izandla zakho. Eyilwe nge pad elingqingqwa ukunciphisa uxinzelelo egxalabeni.
Iimpawu ezipholileyo zeTote Bag
AMANDLA AMANZI: Ibhegi epholileyo inokugcina iilitha ezingama-23 (iilitha ezi-6) ngokomthamo. Ungathabatha iitoti ezingama-32 zezona zilwanyana uzithandayo kunye ne-ice. Amacandelo amabini ahlanganisiweyo avumela ukupakisha ulwelo olwahlulwe kukutya okomileyo. Imilinganiselo yonke imalunga ne-14.9 x 8.6 x 11 intshi / 38 x 22 x 28 cm (L x W x H). Ilungile ipikniki yosapho lwakho iphela okanye ukulayisha ukutya okulula okulula kuqeqesho lwezemidlalo kulutsha ngaphandle, elunxwemeni, inkampu, ukunyuka intaba, izitshixo, umdlalo webhola ekhatywayo njl.
UKUGQIBELA KWELAKHIWO: Ingaphandle lebhegi epholileyo yakhiwe ngobuninzi be-high-density, ukumelana namanzi, ukungcola okungqina ubumdaka elenza ukuba lihlale ixesha elide, lingangeni manzi kwaye kube lula ukulicoca. Ukuphuculwa kolwakhiwo lokuthunga ngokwesintu, icandelo elisezantsi lamkela itekhnoloji yokucinezela eshushu ukudibanisa ulungelelwaniso ngokungenamthungo ukubonelela ngokuvuza okugqwesileyo.
Ixesha elide: Iiyure ezili-12. Ingasetyenziselwa ukuhambisa ukutya kunye nesisombululo esikhulu sokuhambisa ukutya kwivenkile yokutya.
IINGXELO EZININZI: Kuxhotyiswe nge-1 ebanzi ephezulu, iipokotho ezisecaleni ezi-2, kunye neepokotho zangaphambili ezi-2, iipokotho ezininzi zinokuhlangabezana neemfuno zokugcina izinto ezahlukeneyo. Inokusetyenziselwa ibhegi yakho ye-duffel. Eyilwe ngesiphatho esinezixhobo kunye nomtya ogxalathelanayo onika izitayile ezi-3 zokuthwala. Unokukhetha ukuphatha ngesandla okanye ukuphatha ngentambo yegxalaba. Ungayifaka le bhegi kwisutikheyisi yakho yokuhamba nayo.
UKUSETYENZISWA KWEVERSATILE: Le bhegi ipholileyo inokupakishwa ngesidlo sasemini kunye neepakethe zomkhenkce ezimbalwa zokukhempisha, kwaye inokubekwa esiqwini seSUV yakho. Xa uthatha uhambo ngenqwelomoya, inokuyisonga iflethi kwaye uyipakishe kwisutikheyisi yakho.
Uhlobo lweShishini: Ukuphuhlisa, ukuvelisa kunye nokuthumela ngaphandle ngaphezulu kweminyaka eli-15
Iimveliso eziphambili: Ubhaka wobunjani obuphezulu, ibhegi yokuhamba kunye nebhegi yezemidlalo yangaphandle ...
Abasebenzi: Abasebenzi abanamava abangama-200, umphuhlisi we-10 kunye ne-15 QC
Unyaka wokusekwa: 2005-12-08
Isiqinisekiso seNkqubo yoLawulo: I-BSCI, ii-SGS
Umzi-mveliso Indawo: Xiamen kunye neGanzhou, China (Mainland); Iyonke i-11500 yemitha yesikwere
1. Phanda kwaye uthenge zonke izinto ezikhoyo kunye nezinto eziyimfuneko kule projekthi yengxowa
Umbala ophambili weLaphu
IBuckle kunye neWebhu
Uziphu kunye nePuller
2. Sika onke amalaphu ahlukeneyo, i-liner kunye nezinye izinto zobhaka
3. Ushicilelo lwe-silk-screen, Embroidery okanye enye i-logo yezobugcisa
4. Ukuthunga uhlobo ngalunye kuba iimveliso ezigqityiweyo, emva koko udibanise onke amalungu ukuba abe yimveliso yokuphela
5. Ukuqinisekisa ukuba iibhegi zihlangabezana nokubalulwa, iqela lethu leQC lijonga yonke inkqubo ukusuka kwizixhobo ukuya kwiibhegi ezigqityiweyo ngokusekwe kwiNkqubo yethu yoQinisekiso loMgangatho
6. Yazisa umthengi ukuba ahlole okanye athumele isampulu yesampulu okanye isampulu yokuhambisa kubathengi ukuze bajonge okokugqibela.
7.Sipakisha zonke iibhegi ngokweenkcukacha zephakheji emva koko zithunyelwe
Egqithileyo I-Backpack ibhegi yeNgxowa yeNgxowa yeNgxowa ethengiswayo eshushu-uKinghow
Okulandelayo: AbaPhathi beCubing yokuPakisha imithwalo
ibhegi yesidlo sasemini
Iitoti ezingama-20 ezinkulu zeBhegi epholileyo yeeNgxowa
Kupholile kupholile iTote Bag yenethiwekhi
I-Cooler Bag igqunyiwe ukukhempisha
Ingxowa epholileyo-Isiselo kunye noGcino lokuGcina iGol ...